कम्युनिष्टलाई उसको बोलाईवाट होइन, काम गराईवाट नाप्नुपर्छ::त्रिशुलीखवर
प्रधानमन्त्री देउवा भन्छन् : तुच्छ गाली नगरौं, भोलि पनि मिलेरै जानुपर्ने छु
काठमाडौं, मंसिर १८ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हतारोमा थिए तर मुहारमा प्रसन्नता थियो । वाकपटुता देउवाको शक्ति आधार होइन । उनी छोटो र सूत्रमा कुरा गर्न रुचाउँछन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाझैं ।
त्यसमाथि निर्वाचनको मौन अवधि नजिकै आइसकेको सन्दर्भमा देउवा बढीभन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहन्थे । त्यसैले मंसिर १७ गते धनगढीमा हामीले उनलाई सीधै विषय प्रवेश गराउने प्रश्नबाट संवादको थालनी गर्‍यौं ।
यो विशेष अन्र्तवार्ता आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
हेर्नुस्, जस अपजसका लागि काम गरेको होइन तर पनि अलिकति दुःख लाग्छ । निर्वाचन गराउँदै छ भन्ने पूरापूर थाहा भएका विपक्षी नेताले समेत ‘शेरबहादुर चुनाव सार्दै छ’ भन्ने झुटा प्रचार गर्दै हिँडे । इतिहासले मूल्यांकन गर्ला, गणतान्त्रिक नेपालको संक्रमणकाल समाप्त गर्ने निर्वाचनहरू कसले गरायो । हुन त यो कुनै नयाँ कुरा पनि होइन । २००७, २०४६, २०६२-६३ का सबै परिवर्तनहरू हाम्रै नेपाली कांग्रेस पार्टीले निर्णायक भूमिका गरेपछि भएका त हुन् । अहिलेको घटना पनि त्यसै ऐतिहासिक शृंखलाको नयाँ अध्याय हो । अब नेपाल कसैले खोस्न नसक्ने लोकतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको छ।
(अलि झर्कंदै) कसले भन्यो कांग्रेसले डेलिभरी गरेन भनेर । अहिले जसरी संविधान अब पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ, के त्यो डेलिभरी होइन ? यो भन्दा ठूलो डेलिभरी के हुन्छ ? तपाइँ हिजो साँझ काठमाडौंबाट आएर अहिले बिहान अन्तर्वार्ता गरेर आजै दिउँसो काठमाडौँ फर्कनुहुन्छ । हवाई क्षेत्रको विकास नभएको भए यो सम्भव थियो ? कसले गर्‍यो हवाई नीतिमा परिवर्तन ? थाहा छ तपाइँलाई बाटो घाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक, विभिन्न सेवा यी सबै क्षेत्रमा यसकारण विकास सम्भव भयो किनभने उदारीकरणको नीति हामीले ल्यायौं ।
किन ? उनीहरू एकठाम आए राम्रो होइन ? राजनीतिक स्पष्टताका लागि ?
(हाँस्दै ) कम्युनिस्टलाई उसको बोलाइबाट होइन काम गराइबाट मात्र नाप्नुपर्छ । भोलि उनीहरू कसरी जान्छन् त्यो हेर्नुपर्छ । उनीहरू राष्ट्रपतीय पद्धति ल्याउनुपर्छ भनिराखेका छन् । हाम्रो संविधान समावेशी छ । मधेसी, महिला, जनजाति, दलित, आदिवासी, थारू आदिका लागि आरक्षण छ । एकै जनाको हातमा यत्रो शासन दिने व्यवस्था र संविधानका मर्म एकैसाथ जान सक्छन् र रु सुन्दा मीठो लागे पनि नेपालजस्तो विविधताको देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली थाम्न सकिन्छ कि सकिन्न रु जटिल समाज छ हाम्रो । समावेशिता यो संविधानको आत्मा हो । त्यसलाई असर गर्नु भनेको यो संविधान च्यात्नुसरह हो ।
तपाइँ अधिनायकवाद ल्याउँछन् भन्नुहुन्छ । ओलीजीले ‘म लोकतन्त्रका लागि त्यति लडेको मान्छे, कसरी ल्याउँला ? ’ भनेर जवाफ दिनुभयो …..
तपाइँ भन्दै हुनुहुन्छ कि राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिले अन्ततः नेपाललाई अधिनायकवादतिर लिएर जान्छ ?
ओलीजीले मलाई केही दिनअघि भनिसक्नु भो ‘वस्तुतः यो कम्युनिस्ट गठबन्धन पनि होइन वामपन्थी गठबन्धन पनि होइन ।
’त्यसो हो भने पार्टीको नाम फेर्नुपर्‍यो । कसलाई मूर्ख बनाएको ? कम्युनिस्ट देशमा पनि चुनाव हुन्छ र ? म कांग्रेस हुँ । गर्व गर्छु कांग्रेसी भएकोमा । उहाँहरूले पनि आफू कम्युनिस्ट भएकोमा गर्व गर्नुपर्‍यो नि !
ह्वाई नट !